१०० बर्षअघि कस्तो थियो कोरिया? हेरौं यि १२ वटा फोटोमा – फरक दृष्टि
By farak dristhi	 Last updated Mar 9, 2021
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ “A picture is worthathousand words”. यो भनाईलाई प्रमाणित गर्ने दक्षिण कोरियाको १ सय बर्ष अगाडीका फोटोहरु आज राख्न गइरहेको छु। यि फोटाहरु सन १८९० देखि १९०३ सम्म कोरिया आएका विदेशी पर्यटकहरुले खिचेका हुन्।
कोरियाको बिविधता, दैनिक जीवनका यि फोटाहरुले त्यतिबेलाको कोरियाको जनजिवन कस्तो थियो भन्ने कुराको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।पहिलेका यि फोटाहरु हेर्दा जो कोहि अचम्मित हुने गरेका छन्। अहिले कोरियन मुभि तथा ड्रामामा देखिने मानिसहरु र यि फोटाका मानिसहरु धेरै नै फरक छन्। यि तिनै कोरियनहरु हुन भनेर पत्याउन जो कोहिलाई गाह्रै पर्दछ।
१०० बर्षमा धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ भन्ने गतिलो सन्देश यि फोटाहरुले दिन सक्दछन्।पहिलेका यि फोटाहरु हेर्दा जो कोहि अचम्मित हुने गरेका छन्। अहिले कोरियन मुभि तथा ड्रामामा देखिने मानिसहरु र यि फोटाका मानिसहरु धेरै नै फरक छन्। यि तिनै कोरियनहरु हुन भनेर पत्याउन जो कोहिलाई गाह्रै पर्दछ। १०० बर्षमा धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ भन्ने गतिलो सन्देश यि फोटाहरुले दिन सक्दछन्।
एसईई परीक्षा जेठ १३ गतेदेखि सन्चालन हुने (परीक्षातालिकासहित)